प्रश्नः मेरो नाम लेखनाथ राई हो । हाल म कुवेतमा स्काफोल्डिङ कार्पेन्टर काममा कार्यरत छु । सरकारले वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकालाई सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा दिने कुरा स्वागत योग्य छ । तर मैले सुने अनुसार ३ साल परदेश पछि घरमा बसेकोलाई मात्रै यो कर्जा मिल्छ अरे । अनि उक्त रकम साँवा ब्याज १ साल भित्रमा तिर्नुपर्ने भन्ने सुनेको साँचो हो ? जानकारी गराइदिनु होला ।
उत्तरः लेखनाथ जी, तीन बर्ष बैदेशिक रोजगारमा ब
प्रश्नः म युएईमा नयाँ हुँ, केवल तीन महिना भयो । मेरो सम्झौतापत्रमा लेवर भन्ने उल्लेख छ जुन अदक्ष कामदारको पद हो । म घर फर्किनु पर्ने भएको छ र कम्पनीसँग कुरा गर्दा जान सक्ने बताएको छ । म मेरो भिषा क्यान्सिल गरेर स्वदेश फर्किंदा पुनः युएई आउन कुनै बन्देज लाग्छ की लाग्दैन ?
उत्तरः यसरी रोजगारीको भिषामा अदक्ष कामदारका रुपमा आएको अवस्थामा सम्झौता अवधि पुरा नगरी फर्किंदा मन्त्रालयले सिधै एक बर्षको बन
यस्तो अवस्थामा म पुनः कतार जानु ठिक हो की होइन ?
प्रश्नः मेरो नाम श्रीप्रसाद दर्लामी हो । घर नवलपरासी । म ५ बर्ष अघि अर्कै मान्छेको पासपोर्टमा फोटो परिवर्तन गरेर कतार गएको थिएँ । दुई बर्ष मैले त्यहाँ काम गरेर फर्के । म पुनः कतार जान चाहन्छु । तर पहिले मेरो फिंगरप्रिन्ट पनि लिइएको र आँखाको पनि एक्सरे गरिएका कारण मलाई कुनै अप्ठ्यारो पर्छ की भनेर डर लागेको छ । के म जान हुन्छ वा हुन्न होला, उत्तरको अपेक्षा गर्दछु ।
उत्तरः तपाईको फिंगर प्रिन्ट लिइए
यस्तो अवस्थामा मैले उपचार खर्च पाउन सक्छु की सक्दिन ?
प्रश्नः मेरो नाम छल बहादुर महतो हो । मेरो घर कावासोती नगरपालिका वडा नं १५ मा छ । म २७ महिनाको साउदी बसाई पश्चात २०७३ चैत्रमा बिदामा घर आएँ । घर आएर फेरी साउदी जान भनेर बिमा, श्रम पनि गरें तर जाने २ दिन वाँकी छँदा म बिरामी परे । मेरो अण्डकोषमा ट्युमर रहेछु । अपरेशन गरेर निकालिएको ट्युमर परिक्षण गर्दा मलाई क्यान्सर लागेको रहेछ । त्यसपछि मेरो उपचार प्रक्रिया शुरु भयो । उपचारमा झण्डै ४ लाख सकियो । हाल
मैले युएईमा काम थाल्नु अघि के कुरामा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ ?
प्रश्नः म रोजगारीका लागि युएई जाने प्रकृयामा छु । त्यहाँ गएपछि अनावश्यक रुपमा कतिपय कागजातमा हस्ताक्षर गराइन्छ भन्ने सुनेको छु । मैले के के कागजातमा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ <
उत्तरः युएईको यात्रा गर्नुपूर्व तपाईले आफ्नो लिखित रोजगार प्रस्ताव प्राप्त गर्दा, तपाईको रोजगारको नियम तथा शर्तबारे तपाईको प्रकृया गर्ने मेनपाव